कला साहित्य उत्सव सुरु « Loktantrapost
कला साहित्य उत्सव सुरु
१२ फाल्गुन २०७३, बिहीबार २२:१६
काँकरभिट्टा । रिडर्स झापाको आयोजनामा काँकरभिट्टामा विहीवार कला साहित्य उत्सव सुरु भएको छ । खानेपानी कार्यालयको सभाहलमा खचाखच दर्शकविच दुई स्रष्टा प्रनिका कोयु र सरिता तिवारीले देही आर्टद्वारा तयार पारिएको चित्रको अनावरण गरेपछि उत्सवको उद्घाटन भएको घोषणा गरिएको थियो ।
मोफसलमा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्य राखेर ‘गतिशीलताका लागि निरन्तर अध्ययन’ भन्ने भन्ने मूल नारासहित रिडर्स झापाले काँकरभिट्टामा राष्ट्रिय स्तरको कला साहित्य उत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ । यो उत्सवको तेस्रो संस्करण हो ।
तीन दिवशीय उत्सवको पहिलो दिन बिहीबार राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक विधाका हेभीवेटहरुले सामूहिक वहस (प्यानल डिस्कसन) र सम्भाषणमा सहभागिता जनाएका छन् ।
उद्घाटन अवसरमा आयोजकले सभापति, प्रमुख अतिथि, आसनग्रहण, व्याच वितरण, स्वागत मन्तव्य, शुभकामना भाषण जस्ता परम्परागत ढर्राबाट कार्यक्रमलाई मुक्त राख्यो । मात्रै कार्यक्रमका संयोजक दामोदर ढुङ्गेलले रिडर्स झापा र उत्सवका बारेमा संक्षिप्त मन्तव्य राखेका थिए ।
उनले रिडर्स झापा सिकाई केन्द्र भएको बताउँदै पठन संस्कृतिको विकासका लागि कला साहित्य उत्सव एउटा पवित्र अनुष्ठान भएको धारणा सुनाए ।
उद्घाटन अवसरमै किनोट स्पीच दिदै प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले समाजवाद उन्मुख संविधानको चिरफार गर्दैै आफ्नो सम्भाषण प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा रिडर्स झापाका अध्यक्ष उज्ज्वल प्रसाई, एमाले नेता तथा सभासद रविन कोइराला, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका स्थानीय र पत्रकार नारायण वाग्ले, राजनीतिक चिन्तक घनश्याम भुषाल, नागरिक समाजका अगुवा डा. देबेन्द्रराज पाण्डे, साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौला, राजनीतिज्ञ सीपी मैनाली लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा ‘जनजातीय चेतना र सहित्य’ शीर्षकमा भूपाल राई, हेमन यात्री र चन्द्रवीर तुम्बापो विच प्यानल डिस्कसन भएको थियो । उक्त प्यानलको मोडरेटर दिपक सापकोटा थिए । अर्को प्यानल डिस्कसनमा ‘झापा केन्द्रित लेखन र प्रकाशन’ विषयमा प्यानल डिस्कसन भएको थियो । जसको मोडेरेटर लीला अनमोल तथा वक्ता खनिन्द्रा खुशी, कृष्ण बराल, चूडामणि वशिष्ठ रहेका थिए ।
‘संविधान घोषणा पछिको सकस’ विषयमा भएको डिस्कसनमा तुलानारायण साह, नारायण वाग्ले र विन्दा पाण्डे वक्ता थिए भने सागर शिवाकोटी मोडरेटर थिए । त्यसैगरी ‘वैदेशिक सहयोग र लोकतन्त्रको सङ्कट’ विषयमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र भाष्कर गौतम विच प्यानल डिस्कसन भएको थियो ।
पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाको ‘नेपालको वित्तीय नीति’ विषयक सम्भाषण प्रस्तुत गरेका थिए भने ‘मूर्ति, मूर्तिकार र समाज’ भन्ने विषयमा अमिर सुन्दार, विजय श्रेष्ठ र जीवन पौडेल विच प्यानल डिस्कसन भएको थियो । जसलाई छितेन शेर्पाले सहजिकरण गरेका थिए ।
यसैविच, ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झापा विद्रोह’ विषयक प्यानल डिस्कसनमा सीपी मैनाली, रविन कोइराला र अभिजित मजुमदार विच बहस भएको थियो । जसको मोडरेटर निरोज कट्टेल रहेका थिए ।
त्यस्तै ‘नेपाली साहित्यमा नारीवाद’ भन्ने शीर्षकमा सीमा आभाष, हरिमाया भेटवाल र अर्चना थापा विच प्यानल डिस्कसन भएको थियो । जसलाई नारायण वाग्लेले सहजिकरण गरेका थिए ।
पहिलो दिनको अन्तिम सेसनको रुपमा भएको कविता वाचन कार्यक्रममा प्रणिका कोयू, ज्योति भट्टराई, टिका भाइ, राज माङ्लाक, तारा राई, शान्ति प्रियवन्दना, दिपक सापकोटा, चन्द्रवीर तुम्बापो, सरिता तिवारी, सङ्गीत श्रोता, विनोदविक्रम केसी, लीला अनमोल, राजा पुनियानी, पुण्यप्रसाद खरेल, राजन इनोसेन्ट, खगिन्द्रा खुशी, नरेश काङबाङ, दिपा राई पुन, मनोज बोगटी लगायतका कविहरुको प्रस्तुति रहेको थियो । कविता वाचनको संयोजन अस्मिता खनालले गरेकी थिइन् ।
साँझको कार्यक्रम अन्तरगत परिवर्तन थिएटरको नाटक ‘सुकुम्बासी राजा’ मञ्चन भएको थियो । नाटकमा किसान जातिहरुको बदलिएको अवस्थाको विषयलाई कथा बनाएर समस्याहरुलाई देखाइएको थियो ।
नाटकको लेखन तथा निर्देशन कविता नेपालले गरेकी थिइन् । नाटकमा अभिषेक गर्तौला, शुस्मा पोखरेल, केन्द्रप्रसाद भट्टराई, लोमस पौडेल, लिला विष्ट, सम्झना सुब्बा, गणेश बस्नेत, मेघराज खड्का लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका थिए ।
विहीवार सुरु भएको कला साहित्य उत्सव फागुन १४ गतेसम्म चल्ने छ । उत्सव अवधिभर समाज, राजनीति, साहित्य, संस्कृति र स्थानीय समृद्धिको बहसमा ८० जना वक्ता र सहजकर्ताहरु हुनेछन् ।
यस अघि २०६९ सालमा कला साहित्य उत्सवको पहिलो संस्करण सुरु गरेको रिडर्सले २०७१ सालमा दोस्रो संस्करण र यसपाली तेस्रो संस्करणको उत्सव गरेको छ ।
(सबै तस्वीरः शिशिर चम्लागाई)